Nahazo Vola Ohatrinona Tamin’ny Krizin’ny Mpitsoaponenana 2015-2016 Ny Mpitatitra An-Dalamby Makedoniana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jona 2017 12:00 GMT
Mpitsoaponenana miakatra ho ao anaty fiarandalamby ao Gevgelija, Makedonia, 23 Feb 2016. Sary an'i Robert Atanasovski, fampiasàna nahazoana alàlana.
Nandritra ny taona 2015 sy 2016, nampandoavin'ny orinasam-panjakana misahana fitaterana an-dalamby ao Makedonia avo dimy heny amin'ny sarandàlana tokony ho izy ireo mpitsoaponenana mandalo mamakivaky ny faritry ny fireneny rehefa mandositra ny ady, fifandonana, fanenjehana, na ireo tsy rariny hafa. Voakina be mihitsy ilay fihetsika noho izy manararaotra manangona harena amin'ireo olona marefo.
Ndeha hiverenana haingana ny Jona 2017, rehefa nanao fitokonana ireo mpanamory fiarandalamby Makedoniana nitaky ny karaman'izy ireo volana Aprily sy May tsy voaloa. Nahitsok’ilay fitokonana ny fitaterana anatiny ary nifarana afaka andro iray taty aoriana rehefa nanaiky ny governemanta vaovao fa hamaly ny fitakian'izy ireo.
Ny fivoaran-draharaha dia namela ireo Makedoniana hanontany tena hoe ohatrinona ny tombony azon'ireo mpitatitra an-dalamby sy ireo orinasam-panjakana hafa avy amin'ny fitobahan'ireo mpitsoaponenana sy mpialokaloka, ary mankaiza no alehan'izany vola izany. Kanefa niaina fotoan-tsarotra tokoa nikaroka ny marina ireo mpanao gazety, mitaky tamberin'andraikitra, na eo aza ny fandàvan'ny Biraon'ny Fitantanambolam-Panjakana tsy hanome ny antsipirihany.
Manakaiky ny 900.000 no isan'ireo olona mandray ilay antsoina hoe Làlan'ny Balkàna Andrefana hiampitàna avy any Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra ho any Eoropa Andrefana, tamin'ny 2015 sy 2016. Nanomboka ny Jolay hatramin'ny Septambra 2015 fotsiny, maherin'ny 300.000 amin'izy ireny no namakivaky an'i Makedonia nanohy ny làlany avy any Gresy ho any amin'ireo firenena heverina ho tsara fandray kokoa, toa an'i Alemaina.
Tamin'ny tapatapaky ny 2015, taorian'ny nitomboan'ny fitobahan'ireo mpitsoaponenana sy ireo hafa mpifindramonina, nametraka fiarandalamby manokana ny fanjakàna Makedoniana. Mandeha tongotra miampita ny sisintany avy any Gresy ireo mpitsoaponenana, hamarinina eny ny momba azy, avy eo akarina anaty fiarandalamby ao Gevgelija ary midina rehefa tonga ao Tabanovce, akaikin'ny sisintany Serba, izay an-tongotra ihany koa no hiampitàn'izay ireo azy. Ity lahatsary manaraka avy amin'ny Vokovoko Mena ity no manome topimaso amin'ny toedraharaha tamin'izany fotoana izany.
Nanana sarandalana manokana ho azy ihany koa ireny fiarandalamby ireny : nakarin'ilay orinasam-panjakana Makedoniana ho 25 Euro, avo dimy heny amin'ny mahazatra ny vidin'ny tapakila ho an'ireo mpandeha aminy, izay tsy afaka misafidy fomba fitaterana hafa ara-dalàna. Raha ny marina, henjehina ho manao fanondranana olona ireo olompirenena mikasa hanampy ireo mpitsoaponenana hamakivaky ny firenena. Toy izao no nanoritsoritan'ny Siriana iray mpitsoaponenana ny diany tamin'ny alàlan'ilay fitaovam-pifamoivoizana eken'ny lalànam-panjakana:
Nandoa 25 Euro (27 dolara) isanolona izahay mba hahafahana miakatra ao anatinà korontam-pako efa drodraka be antsoin-dry zareo hoe fiarandalamby. Tsy misy teny afaka hamaritana ny loto sy ny fofona mahatsiravina ao anatiny. Avy eo, rehefa nifatratra tao ny rehetra, toy ny mandeha ambony atody ny hafanganam-pandehany. Izany no filazanay ny zavatra miledaleda any Siria. Saingy tonga tany amin'ny sisintany Serba ihany aho nony farany.
Tsy nitsahatra ny nisedra olana ara-bola ilay orinasam-panjakana Makedoniana misahana ny fitaterana an-dalamby noho ireo lazaina fa tsy fahaizana mitantana. Raha kely indrindra dia efatra taona niasàna tanaty fatiantoka ry zareo, miaraka aminà fatiantoka nivangongo mitentina 27,6 tapitrisa Euro ho an'ny sampana misahana fitaterana, ary maherin'ny 30 tapitrisa Euro ho an'ny sampana misahana ny fotodrafitrasa.
Io no toa nahatonga ny faharatsian'ny fepetra iaisàn'ireo mpiasan'ny lalamby, izay mitaraina fa ratsy karama ary matetika no terena hiandry am-bolana maro vao mahazo ny karamany. Ny Jona, tonga tamin'ny faratampony ny toedraharaha tamin'ny nitokonan'ireo mpanamory fiarandalamby.
Ny 5 Jona 2017, Robert Atanasovski, fantadaza amin'ny asa fakàna sary fanao an-gazety dia nampifandray ny olan'ireo mpitsoaponenana tamin'ilay hita ho fahasahiranana ara-bola mahatsiravina mianjady amin'ilay orinasam-panjakana misahana ny fitatarena an-dalamby, rehefa namoaka sary iray tao amin'ny Facebook (natolotra ery ampiandohan'ity tantara ity) ary nanoratra hoe :
Nitombo tao anatin'ny fankahalàna ireo mpiasan'ny làlamby aho. Nijery azy ireo efa ho herintaona mahery aho amin'ny fomba fampidiran-dry zareo ny olona ho ao anaty fiara, toa sanatria toy ny biby fiompy, ary ambonin'izany mbola ampandoaviny tapakila sandaina 25 Euro, isan'ireny ilay lehilahy [mampiasa seza misy kodiarana] hita amin'ny sary. Amin'ny 25 Euro, afaka mividy tapakila iray handehanany fiaramanidina ny olona iray, miala ao Skopje mankany Barcelona amin'ny zotram-pitaterana WizzAir, nefa dia fiarandalamby kodraka hankany Tabanovce. Nisy fotoan'andro nahitàna olona maherin'ny 10.000 niampita ny sisintany, ary tsy maintsy mividy tapakila ny tsirairay (ankoatry ny ankizy madinika)… Ankehitriny ry zareo te-hitokona satria hoe tsy mandray karama. Nankaiza ny vola, r'ilay mpangalatra t*y ireto?!
Tany amboalohany ireo fikambanana mpiaro zon'olombelona sy Makedoniana mpanelanelana dia efa nangataka fanaovana fitsirihana ny asa sy ny vola miditra amin'ireo orinasa misahana fitaterana an-dalamby momba ireo lazaina fa fanitsakitsahana ny Fifanarahana sy Fitànana an-tsoratry ny Firenena Mikambana momba ny Satan'ireo Mpitsoaponenana.
Andro maro taty aorian'ilay fitokonana, nolavin’ ny Biraon'ny Fitantanambolam-panjakana ny hanome vaovao ho an'ireo mpanao gazety nanao fanadihadiana, tamin'ny filazàna fa tsara pirina ny angon-drakitra momba ny tombontsoa azon'ireo orinasam-panjakana misahana fitaterana an-dalamby, manana ny sata “hetra miafina”
Nandritry ny fotoana naha-faratampony ny krizy, farafaharatsiny niafara tamin'ny fahatafintohinan'ny Makedoniana ny fitsentsefana ataon'ny olontsotra ny fahorian'ireo mpifindramonina sy mpitsoaponenana. Talohan'ny nampidirana ilay fiarandalamby manokana, nataon'ireo mponina amin'ireo tanàna manamorona ny sisintany iraisana amin'i Gresy nidangana be tokoa ny vidin'ny bisikilety ho an'ireo miampita ao. Eny an-dàlana, mivarotra sakafo sy rano fisotro amin'izy ireo ny olona sasany, amin'ny vidiny lafo dia lafo mihoatra noho ny any amin'ny toeram-pivarotana, na mitaky hatramin'ny 2 Euros raha misy hamahana finday na hampiasa trano fidiovana. Anatin'ity lahatsary manaraka ity, lehilahy iray nifindra monina nandalo tamin'ireo faritra ireo no manazava: “Tena mahantra ireny olona ireny, ary maniry ny hiasa. Angalàn-dry zareo vola misimisy ihany ny olona…”
Etsy ankilany, marobe ireo olompirenena Makedoniana hafa no namoaka vola am-paosy ho fanampiana ireny mpitsoaponenana sy mpifindramonina ireny, ka niteraka hetsika miana-mamindra ho an'ny maha-olombelona no niafaràny. Navoakan'ny Global Voices ny fijoroana vavolombelona avy amin'i Lenče Zdravkin, mpirotsaka an-tsitrapo mendri-piderana, raha ireo fikambanana fiarahamonina sivily kosa, toy ny Macedonian Helsinki Committee sy Legis mamoaka tatitra tsy tapaka amin'ny teny Anglisy momba ny asan'izy ireo.